Isilawuli sokukhanya: dala okwakho ukuphatha ukukhanya kwakho | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Dimmer: dala okwakho ukuphatha ukukhanya kwakho
Njengamanje kunenqwaba yama-smart bulbs angalawulwa kusuka kuhlelo lokusebenza lweselula noma ngabasizi abathile ababonakalayo ngemiyalo yezwi. I-Smart Home, noma ikhaya elihlakaniphile, lisemfashinini, futhi uma ufuna ukuqala ukufunda ukuthi lezi zinhlelo zisebenza kanjani, ungazenzela fiphala ekhaya
Ngayo ungakwazi ukulawula umfutho yesibani noma isibani ukudala isimo osithandayo. Ukuqina okukhulu lapho ufunda, ufunda, njll., Kanye nokuncane ukuze wakhe umoya wokwamukela lapho ufuna ukuphumula ...
1 Kuyini ukufiphala noma ukufiphala?
1.1 Izinto zokwakha
2 Ukuqaliswa nge-Arduino
Kuyini ukufiphala noma ukufiphala?
Un fiphala, noma ukukhanya okukhanyayo, kuyidivayisi ekwazi ukulawula amandla kagesi ngokuya ngama-voltage regulators noma ama-triacs. Lokhu kuguqula amandla kagesi afinyelela ku-bulb nokuqina kwawo kuzoshintsha kuye ngokuya ngevolthi yokuphakela. Isibonelo, kuleli cala ngizokhombisa umlawuli ukuthi bekufanele ngihlangane kudala ukuthola iphrojekthi esifundweni se-elekthronikhi.
Ilula, ishibhile, futhi ingasetshenziswa ne- noma iyiphi isibani esivamile. Ukuze uyidale, nayi imiyalo ...
Okudingayo kule phrojekthi ye-DIY ukuba namakhono omenzi futhi izinto kulula ukuthola okufana:
Ikhebula lethusi eliyibhili kokuphakelwa kukagesi.
Xhuma ukuxhuma kunoma iyiphi indawo yokuthengisa ukuze unikeze amandla.
I-fuse yeglasi we-5A, omelwe ngu-F kusikimu. Ngokuzikhethela, ungasebenzisa isibambi se-fuse, ukwenza kube lula ukushintsha i-fuse, yize ingathengiswa ngqo.
Ukuvikela ibhokisi o ukushumeka. Ungayiphrinta futhi i-3D uma unayo iphrinta, noma uyenze ngokhuni, njll. Izosebenza njengokwesekwa nokufakwa kwesifunda.
Ephrintiwe wesifunda ibhodi ukuyiqopha ngesekethe efanele noma ibhodi lesinkwa.
I-Triac BT137 y isinki yokushisa ye-triac.
I-Diac BR100 noma okufana nakho.
2x 39nF / 250v ama-polyester capacitors (C1 no-C4). Futhi enye i-2x 22nF / 250v polyester capacitors (C2 ne-C3).
I-potentiometer eqondile Ayikho imikhiqizo etholakele. (P1), izosebenza njenge-actuator ukuze ikwazi ukulawula amandla ngesandla.
Ukumelana ne- 12KΩ 0,5w (R1) nokunye ukumelana kwe- I-100Ω 0,5w (R2).
Ikhoyili eminyene ene-ferrite (L).
Splice ithebhu ukuxhuma okukhiphayo (S) nokufaka (E).
I-iron soldering iron (uma ungeke usebenzise i-breadboard).
Ngakho konke lokhu, kufanele ukhiqize okulandelayo umjikelezo kagesi:
Uma konke sekuxhunyiwe, Umphumela kufanele kube yinto enjengale:
Futhi ukusebenza kufanele uthole umphumela olandelayo:
Manje uma ufuna gcina izingxenye y sebenzisa i-arduino ukwenza i-dimmer, lapho-ke ungakwenza futhi kalula. Eqinisweni, bayathengisa Amamojula we-LED anciphise we-AC kuze kufike ku-240V kanjena, ukwenza izinto zibe lula kuwe. Ukucushwa kwayo kulula ...
Kukhona nemiklamo elula yokulawula ukuqina kwama-DC LEDs, noma ngabe lokhu akuyona into esiyifunayo lapha ...
para yenza ukufiphala kwethu, noma kufiphele, no-Arduino, ungakwenza ngezindlela eziningi. Ungasebenzisa ngisho nezinto eziningi kusuka kuhlelo lwangaphambilini ukudala le phrojekthi:
Ungasebenzisa ngisho i- Imodyuli ye-WiFi ukwakha isibani esihlakaniphile ...
Njengoba ukwazi ukubona, i- amathuba ziningi impela ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Dimmer: dala okwakho ukuphatha ukukhanya kwakho
I-ATECC608: imodyuli yezokuphepha ye-Raspberry Pi
I-DS3231: iwashi lesikhathi sangempela nekhalenda le-Arduino yakho